Säpo ”Howlo sidaa u murugsan horay nooma aaney soo marin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Säpo ”Howlo sidaa u murugsan horay nooma aaney soo marin
La cusbooneeyay torsdag 16 mars kl 12.02
La daabacay torsdag 16 mars kl 10.17
Sumadda ciidanka nabad-sugidda Sweden Säpo. sawir: Janerik Henriksson/TT
Hayadda nabad-sugidda Sweden ee magaceeda loo soo gaabiyo Säpo ayaanay horay u soo marin howlo sidaa u baaxad wayn una cakirnaan badan.
Sida uu sheegay madaxa hayadda Anders Thornberg oo maanta soo ban-dhigay war-bixin howleedkii hayadda ee sannadkii 2016.
In xaaladda nabad-sugiddu sii qalaf-sanaatay ayay ugu wacan tahay is-bedelka caalamka ku yimid iyo dalka Sweden oo istaraatiijiyadda uu leeyahay kor u sii kacday iyo sidoo kale kaalinta ey muwaadiniin iswiidhish ahi ku leeyihiin falalka argagixisada.
Illaa iyo iminka ayaanay dalka ka dhicin falal argagixis-nimo, hase yeeshee ay muuqatay in dhacdooyinkii magaalooyinka Nice, Brugsel iyo magaalada Baariis ee sannadkii 2016 ku caddaatay iney jiraan saameeyn ey la leeyihiin muwaadiniin Swiidhish ah, sida uu sheegay madaxa hayadda Säpo Anders Thornberg.
Waa xaalad halis ah oo na xasuusineeysa in howlaha ay hayadda nabad-sugidda ee Säpo ku howlan tahay aaney aheyn kuwo xuduud leh isla-markaana loo baahan yahay wada-shaqeeyn ey waddammadu ka yeeshaan sidii looga hor-tegi lahaa.
Basaasyo gacanta lagu dhigay
Muddadii uu socday shirka jaraa’id ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday goobaha ama dhismeyaasha sirta ah.
- Intii lagu guda jiray sannadkii 2016 ayuu ciidanka nabad-sugiddu ku howl-galayay howlo la xiriira dadyoow u basaasayay quwado ajnabi ah, sida uu sheegay Fredrik Agemark, ahna madax-waaxeed ka howl-gala hayadda nabad-sugidda.
Basaasyo ka shaqo doontey hayado xasaasi ah, ama quwado shisheeye oo isku dayey sidii ey u soo jiidan lahaayeen howl-wadeenno hayado xasaasi ah ka howl-gala, sida uu sheegay Agemark.
Middaasi oo macnaheedu tahay in hayaduhu kaga sii wanaagsanaadaan sidii ey ku ilaalin lahaayeen ammaankooda, sida ay qabto hayadda nabad-sugidda dalka ee magaceeda loo soo gaabiyo Säpo oo qiimeeyn ku sameeysay howlihii hayadda ee sannadkii ina dhaafay 2016.
Dhacdooyinka argagixisada Yurub oo weli Sweden cabsi ku haya
torsdag 16 mars kl 13.39